Sawirro-Madaxweyne Gaas oo dalacsiiyey saraakiil tababar kusoo qaatay Itoobiya. – Radio Daljir
Sawirro-Madaxweyne Gaas oo dalacsiiyey saraakiil tababar kusoo qaatay Itoobiya.
Nofeembar 19, 2016 1:52 b 0
Garoowe, Nov 19 2016–Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 19 November, 2016 waxa uu dallacsiiyay saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Dawladda Puntland , saraakiishaas oo tababar ciidan oo mudo laba sano ah kusoo qaatay dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa shan ka mid ah saraakiishan dallacsiiyay laba xiddiglayaal halka sarkaalka lixaadna uu Madaxweynuhu u dallacsiiyay saddex xiddigle , waxaana dhamaantood laga sugayaa inay dadka iyo dalka ugu adeegaan si daacadnimo ah.
Taliyaha guud ee ciidamada Dawladda Puntland General Siciid Maxmaed Xirsi “Siciid Dheere” oo madasha dallacsiinta saraakiishan ciidanka ka hadlay ayaa sheegay in ay usoo dhabar adaygeen tababar adag oo ay soo qaateen oo mudo labo sano ah uga socday kulliyadda Mojor General Hayllom Araya ee dalka Ehiopia, isla markaana wixii hada ka danbeeya laga sugayo inay dadka iyo dalka ugu shaqeeyaan aqoonta ciidan ee ay soo qaateen.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad kooban u jeediyay saraakiisha uu dallacsiiyay ayaa uga mahadceliyay sida wadaniyadda leh ee ay usoo dhamaysteen tababarkii loo diray laba sano ka hor , wuxuuna ku adkeeyey inay kasoo baxaan masuuliyadda ka saaran dadka iyo dalka iyo sidoo kale inay ka qayb galaan difaaca dhulka iyo dadka Puntland.
Ugu danbayn, Madasxweynaha Dawladda Puntland ayaa ku howlan qorshayaasiisa ku salaysan tababarida iyo tayaynta ciidamada kala duwan ee Dawladda Puntland.